ထူးချွန်သည့် မွန်လူမျိုး သတင်းထောက်မှ Myanmar Express တည်ထောင် သူ၏ ဓာတ်ပုံကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ | Democratic Wave
ထူးချွန်သည့် မွန်လူမျိုး သတင်းထောက်မှ Myanmar Express တည်ထောင် သူ၏ ဓာတ်ပုံကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့
Posted by Demo Wave , at 12:46 PM 10 comments
ထူးချွန်သည့် မွန်လူမျိုး သတင်းထောက်မှ Myanmar Express တည်ထောက်သူ၏ ဓာတ်ပုံကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သတင်းအပြည့်အစုံကို http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/2012-04-04-10-49-44/2038-2012-08-21-06-36-30.html မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Tuesday, 21 August 2012 13:27
Written by နာဇီလက်သစ်
ဗမာ လူမျိုးကြီးဝါဒီ၊ နာဇီလက်သစ်၊ မူဆလင် မုန်းတီးရေးသမား၊ ဗိုလ်သန်းရွှေ၏ အတိုက်အခံ နှိမ်နင်းရေးအတွက် လက်သပ် မွေးထားတဲ့လူယုံ၊ စစ်ခွေး အကြီးစား၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး သမားများအား မီဒီယာစစ်ဆင် ရေးလုပ်နေသော Myanmar Express website ၏ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်၊ ကလောင်အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့် အစိုးရသတင်း စာများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပုတ်ချ ဆောင်းပါးများ ရေးသားနေသူ၊ ဦးနေ၀င်း၏ မြေးများထံတွင် လက်တိုလက်တောင်း အခိုင်းခံ ခစားပြီး လိုအပ်လျှင် ၎င်းတို့အတွက် လူမိုက်လုပ်ပေးတတ်သူ၊ သူဝင်ထွက် ပတ်သက်နေရသည့် အရပ် ဖက်ဌာနများမှ အရာရှိကြီးငယ်များ၏ ဇနီးများကို ကြာကူလီရိုက်တတ်သူ၊ …….
အရာရှိငယ်ဘ၀က ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် မုဒိန်းမှုများစွာ ကျူးလွန်ထားကြောင်း တိုင်းရင်းသား လူ့အခွင့်အရေး စောင့် ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့များ၏ မှတ်တမ်းများတွင် ရှေ့ဆုံးမှ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရသူ၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကာလအ တွင်း ငွေကြာယံ၊ သာကေတရှုခင်းသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ ၀င်စီးရာတွင် အပြစ်မဲ့ အရပ်သားများ၊သံဃာတော်များကို ရက်ရက်စက်စက် ပစ်သတ်ခဲ့သူ၊ ဆန္ဒပြသူများကိုဖမ်းဆီးပြီး အင်းစိန်GTCတွင် ချုပ်နှောင်ကာ စစ်ဖိနပ်ဖြင့် မျက်နှာတည့် တည့်ကန်ကျောက်နှိပ်စက်ခဲ့သူ၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေးခေတ်ကောင်းစဉ်က လားဟူ၊ ကိုးကန့် အဖွဲ့များနှင့်ပေါင်းကာ ဘိန်းဖြူ မှောင်ခို အကြီးအကျယ်ကူးခဲ့သူ၊ …………..
နာဂစ်မုန်တိုင်းကာလအတွင်း နိုင်ငံတကာမှလှူဒါန်းသော ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ပြည်တွင်းမှလှူဒါန်းငွေများကို ကြား ဖြတ် အချောင်ဝင်နှိုက်ခဲ့သူ၊ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ၎င်းအမိန့်ဖြင့် အကြောင်းမဲ့သက်သက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသော ရွာပေါင်း ၂၀ ခန့်ရှိ၊ ရုရှားသို့ ပညာတော်သင် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ထွက်ခွာပြီး ရုရှားတွင် ကျောင်းမတက်ပဲ တနေကုန် အွန်လိုင်း ထိုင် ပြီး နိုင်ငံတကာသို့ ရောက်နေသော မိန်းခလေးများကို မြူဆွယ်ဖျက်ဆီးနေသောသူ၊ သူနှင့် ပတ်သက်မိသည့် မြန်မာ မိ ကောင်းခင်သမီးငယ်များမှာ အပျိုရည်ဖျက်ဆီးခံရသည့်အပြင် ဗီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူး၍ အင်တာနက်ပေါ်တွင် အရှက်ခွဲ မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ငွေညှစ်ခံရခြင်း၊ မပေးနိုင်ပါက ညစ်ညမ်းဝက်ဆိုက်များတွင်တင်၍ အရှက်ခွဲခြင်းကြောင့် ယမန်နှစ်က နိုင်ငံခြားတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်သွားသော မိန်းခလေးများစွာရှိခဲ့……………………..
အကြောင်းမသိလျှင် စကားအပြောအဆို အလွန်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သည်ဟု ထင်ရပြီး ရိုင်းစိုင်းစွာပြောဆို တတ်သည့်နေ ရာတွင် ငါးစိမ်းသည်၊ပြည့်တန်ဆာမကတောင် အရှုံးပေးရမတတ် ညစ်ညမ်းစွာ ဆဲဆိုတတ်သူ၊ ရုပ်ချောသလောက် အရှက် မရှိလိမ်ညာကြွားဝါတတ်သူ၊ ပျိုပျိုအိုအို ရသမျှအပိုင်ချိုင်တတ်သည့် ပိုင်းလုံးအကြီးစားတစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် ယခုဖြစ်ပေါ် နေသော ရခိုင်အရေးအခင်း ဆူပူအုံကြွမှုများ၏ နောက်ကွယ်မှ အဓိကလက်သည် တရားခံ၊ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေး အမည်ခံ ကာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို အကောင့်ခွဲပေါင်း မြောက်မြားစွာအသုံးပြု၍ စော်ကားနေသော စနေဂိုဏ်း၊ ဘာဘာစားသောက် ဆိုင်စသည့် အဖွဲ့များ၏ ခေါင်းဆောင်၊ ကုလားခေါင်းဖြတ်ဂိုဏ်းပိုင်ရှင်၊ မူဆလင်ဟန်ဆောင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန်စော်ကား နေသောသူ၊ စစ်အရေခွံချွတ်သိန်းစိန်အစိုးရ၏ လက်ကိုင်တုတ် မူလလက်ဟောင်း စစ်ခွေး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရာ ထူးအ ဆင့်ရှိသည့် မြတ်သိန်းထွန်း၏ ဗိုလ်လောင်းဘ၀က ဓာတ်ပုံ……………………..
မကြာခင် ထူထောင်မည့် ဒီမိုကရက်တစ် ရိုဟင်ဂျာစော်ဘွားနိုင်ငံတော်၊ Syahida နေပြည်တော်တွင် စိုးစံမည့် ရိုဟင်ဂျာ စူ လတန် အလီဘာဘာ အာလာဒင် မူဂျာဟေဒင် ဘုရင်မင်းမြတ်အလောင်းအလျာ မြတ်သိန်းထွန်း၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်သူများ ကြိုတင်ဖူးမျှော်မြတ်နိုးခွင့်ရရှိစေရန်အလို့ငှာ တတ်နိုင်သလောက် များများရှယ် ပေးကြပါ။...ဟီးဟီး
အဲဒီထဲမှာ ဂျာဂျာတို့ရေးတာ ဖတ်မကောင်းလို့ ကိုယ့်ဘာသာပြန်ရေးလိုက်တာ မိုက်တယ်နော် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်တောင် ထိုင်ငိုသွားမယ်
ပြောချင်ဇောနဲ့ မောနေပါ့မယ် သေချာလဲ သတင်းရင်းမြစ်ကိုလှန်ပါဦး လူတွေအမြင် စောက်ပေါဖြစ်နေမယ်
မဟုတ်တာတွေကွာ ... ပေါလှချေလား ကိုယ့်လူ ရယ် .... ဟာသဖတ်နေရသလိုပဲ ... ဟစ်ဟစ်
September 30, 2012 at 2:21 AM
ပေါရဲလိုက်တာ......ချာတူးးးကိုလန်နေတာပဲ...ဘာတဲ့ ထူးးးချွန်တဲ့ မွန်သတင်းးထောက် ဖော်ထုတ်တာတဲ့ လားးးးးးး ထူးးးချွန်တာကလည်းးးး မွန်တွေကို သက်သက်နာမည်ဖျက်နေသလိုပဲ.....အဟက်....နုပါသေးးးတယ် ညီလေးးးတို့ ရာ ဆက်ကြိုးးစားးးလိုက်ပါအုန်းးးးး လုံးး(လုံးးဝ) ကို မမှန်တာပါခင်ညာ.....
ရေးတဲ့ကောင်ရော ... တင်တဲ့ကောင်ရော ... စောင့်ရူးတွေပဲကွာ ... ဆိုဒ်ရဲ့နာမည်နဲ့ ဘေးကပုံတွေကိုမှ အားမနာဘူး...
မင်းအဖေကဒီမိုကရေစီ ကိုမျှော်နေတာမဟုတ်ဘူးကွ ....မင်းတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီ လောက်နဲ့တွေလောက်နဲ့တော့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး....မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကို တကယ် ပြောင်းလှည်းစေချင်ရင် ....ပြည်သွင်းက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပြသာနာတွေ ကို အရင်ရှင်းအောင်လုပ်အုန်း....မင်းတို့ကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဆန်ဒကိုမှ မသိဘဲ ဘယ်လိုပြောင်းလည်းနိုင်မှာလည်း ...သိတော့ကောမင်းတို့ကောင်တွေဘာလုပ်ပေးလည်း ..ဘာလည်ကုန်းထက်တိုက်ပေးမလို့လား .....မင်းတို့ဘဲခံရမှာ ...လောလောဆယ်ဖြစ်သွားတဲ့ ရခိုင်ပြည်က ကိစ်စကိုဘဲကြည့် လိုက် ဘယ်သူပိုခံရလည်းဆိုတာ .....ခုမင်းတို့ ကုလားကွက်ထည်းမိနေပြီမလား ..ကုန်းတိုက်လိုက်အုန်းလေ ....တော်ပြီရေးနေလည်း မင်းတို့ကောင်တွေ က ကျွဲးပါးစောင်းတီးသလိုဘဲ .....
အော်... မြတ်သိန်းထွန်းတော့ သူ့ဘာသာသူ ဘင်္ဂလီ ကုလားတွေကို သရော်ပြီးတင်တဲ့ပို့စ်က နာမည်ကြီးသွားပြီ..။ :P :P
ဒီလှိုင်းက Admin နဲ့ Moderator က Facebook ကို သုံးဖူးဟန်မတူဘူး..။ စာများများ မဖတ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်.။
ဒီလှိုင်းလို Site မျိုးထဲမှာ ဒီလို မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုး၊ အခြေအမြစ်မရှိတာမျိုး မရှိသင့်ပါဘူး။
အပေါ်က နေ အောက်ဆုံးအထိ စာအားလုံးက မြတ်သိန်းထွန်းကိုယ်တိုင်ရေးထားတာ.. သူ့ဘာသာသူ ဘင်္ဂလီ (ရိုဟင်ဂျာ) ကို သရော်ထားတာဆိုတာ Facebook သုံးသူအားလုံး သိပါတယ်..။
အဲဒီလောက်အထိတော့ Online ဗဟုသုတလေးဘာလေးတော့ ရှိဦးမှပေါ့..။ ဒီလှိုင်းရာ.။
ရွှေဟင်္သာက တင်တာကို ဒီလှိုင်းက ထပ် ဖော်ပြတာ... ရယ်တော့ ရယ်ရတယ်ဗျ..။
မူရင်း Facebok Post အောက်က ကွန်မင့်တွေကို သေချာဖတ်ကြဗျာ..။
သေချာတာကတော့ မြတ်သိန်းထွန်းဆိုသူက အမေစုကို ... လေးစားတဲ့သူပါ..။
တိန် ... နောက်တယ်ဂျာ .... ဟိဟိဟိ
စာလေးဘာလေး သေချာဖတ် ... မသိလည်း မေး ပေါ့ဂျာ ... ခုဟာက တခုတွေ့တာနဲ့ စွတ်ဖျဲ စွတ်ဖွမယ်ဆိုတာချည်းပဲ
ဒီဒီလှိုင်းတဲ့လား ဒါမျိုးတွေရေးမှထမင်းစားဖို့ နေ့တွက်စီတဲ့ကောင်တွေပဲ ။ပြည်ပြေးတွေ ဒေါ်လာရရင်တိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားနေတဲ့ စုကြည်တပည့်တွေ အဆင့်မရှိ အရှက်မဲ့ကျတာ ကမ်းကုန်နေတယ်။ ဟဟဟ ပေါက်ကရတွေတင်ထားတာ သတင်းဖြစ်ရောလား စောက်ရူး ဒီမိုဒီလှိုင်းသူတောင်းစားအာဏာရူးတွေ။.
ငါလိုးမမွန်လူမျိုးတဲ့လား လီးလိုမှပဲ ဒီဒီနဲ့ပေါင်းပြီးရူးကြောင်ကြောင်လုပ်နေတာဘဲ
မွန်သိက္ခာကျတယ်ကွာ လီး မင်းအရမ်းကျွမ်းနေလဲ
ငါဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာ ဘယ်နားမှာအိမ်သာတက်ခဲ့တာလဲ
ရှာပေးပါဦး မင်းကိုကျွေးဖို့ ချီးတုံးပြပေးမလို့လေ
ဒါက ဒီလှိုင်းက မွန်တွေအရမ်းတော်တယ်ဆိုပီး လှောင်ပြောင်ရအောင် ပညာသားပါပါနဲ့ ငါတို့မွန်ကို ညစ်လိုက်တာပဲ